mushaGENERALNhasi Munhoroondo: 10 October 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro te
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş GENERAL, TURKEY, Nhasi munhoroondo 0
10 October 1875 Ottoman mari, chido uye zvikamu zvezvikwereti 5 akazivisa kuti hafu yegore.
Kuvakwa kwe10 October 1924 Ankara-Musaköy yakatanga.
10 October 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Mutsara weMetro wakazaruka
Nhasi munhoroondo: 10 October 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro ... 10 / 10 / 2017 Nhoroondo Munhoroondo Yenyika 10 October 1875 Ottoman mari, ruzivo uye zvikamu zvezvikwereti 5 hafu yegore rakataurwa. Kuvakwa kwe10 October 1924 Ankara-Musaköy yakatanga. 10 October 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Mutsara weMetro wakazaruka
Nhasi munhoroondo: 21 January 2017 Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro ... 21 / 01 / 2018 Nhoroondo Nhasi 21 January 1902 Umambo hweOttoman uye Anatolian Railway Company yakasaina chibvumirano chokupedzisira chokubvumirana kwekuvakwa nekushanda kweBaghdad Railway. Nguva yegvumirano yakatemwa seC99 gore. nzira; Konya-Karaman-Eregli-Adana-Hamidiye-Kilis-Abhissi-Nusaybin-Mosul-Tekrik-Samarra-Baghdad-Karbala-Najaf yakanga yakatarwa seBasra. Kunyangwe nhamba huru yematavi ebazi nehuwandu hwakareba hwe2467 km yaizoiswa. Sangano racho rakapiwa kodzero yekushanda ngarava pakati peSirkeci neHaydarpaşa, vachiita chikepe muBaghdad, Basra uye Iskenderun Bay. January 21 2017-Yakacık-Pendik-Kartal Metro Line Tavşantepe Tavşantepe Station yakavhurwa ari mhemberero wakapindwa Prime Minister Recep Tayyip Erdogan
Nhasi munhoroondo: 21 January 2017 Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro ... 21 / 01 / 2019 Nhoroondo Nhasi 21 January 1902 Umambo hweOttoman uye Anatolian Railway Company yakasaina chibvumirano chokupedzisira chokubvumirana kwekuvakwa nekushanda kweBaghdad Railway. Nguva yegvumirano yakatemwa seC99 gore. nzira; Konya-Karaman-Eregli-Adana-Hamidiye-Kilis-Abhissi-Nusaybin-Mosul-Tekrik-Samarra-Baghdad-Karbala-Najaf yakanga yakatarwa seBasra. Kunyangwe nhamba huru yematavi ebazi nehuwandu hwakareba hwe2467 km yaizoiswa. Sangano racho rakapiwa kodzero yekushanda ngarava pakati peSirkeci neHaydarpaşa, vachiita chikepe muBaghdad, Basra uye Iskenderun Bay. January 21 2017-Yakacık-Pendik-Kartal Metro Line Tavşantepe Tavşantepe Station yakavhurwa ari mhemberero wakapindwa Prime Minister Recep Tayyip Erdogan
Mutsara weKartal-Pendik-Tavşantepe wakazaruka 10 / 10 / 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro mutsetse yakavhurwa Istanbul muna Gokova-Kartal Metro rwokuyera kuenderera Kartal-Pendik-Tavşantepe mutsetse, wachi akatanga nguva 06.00. Istanbul Metropolitan Municipality "muna 2019 400 More Mileage kubva Metro Network" 4,5 makiromita huru akaita pasi Kartal-Pendik-Tavşantepe mutsetse akapinda basa 06.00. Okisheni March 6 2013 akaita mu hunyambiri aibuda chubhu, Yakacık (Adnan Kamal), Pendik uye Kandira (Tavşantepe) ine nhepfenyuro kusanganisira 3. manera pamwe vachifamba panguva Masuo ose uye migumo kuchiteshi mutsetse yemapurisa ane anosimudza wevakaremara. pazviteshi zvose D-100 Highway migwagwa, Masuo migumo kuchamhembe uye kurutivi rwezasi nzira uye pokutanga pakati pavo. Service-Pendik-Kartal Metro mutsetse Tavşantepe ...
Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line inotanga mangwana 20 / 01 / 2017 Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line inotanga mangwana: Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line ichazarurirwa mangwana nekubatanidzwa kweMutungamiri Erdoğan. Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line ichabatwa nekubatanidzwa kweMutungamiri Erdoğan mangwana. Inyika iri kuenderera mberi inoita Istanbul guta repiri munyika uye rine zuun metro network. 2004 pre-45,1 makiromita kubva kumitsara yemigwagwa, 2004-2017 149,95 yakawedzerwa kusvika makiromita. 2019 ichasvika mu 489,15, uye mushure mokunge 2019, makiromita ane chiuru kwemazuva ano metro network ichasvika. Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line, iyo iri pakati pemigwagwa inowanikwa nechitenderera ... KweseMetro, He Yerde Metro de, "
Nhasi munhoroondo: 10 October 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro ...
Nhasi munhoroondo: 21 January 2017 Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro ...
Mutsara weKartal-Pendik-Tavşantepe wakazaruka
Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line inotanga mangwana
Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line Yakasimbiswa Nemitambo
Tender Announcement: Project Construction Consultancy Service inotengwa (KwaKaynarca Merkez-Pendik-Tuzla Shipyard Metro Line uye Pendik Centre-Kaynarca Central Metro Line)
Kaynarca Centre - Pendik - Tuzla Shipyard Metro Line uye Pendik Center - Kaynarca Centre Metro Line Project Kusarudzwa kushanda kwekupedzisira kwebasa remashandiro yepurogiramu yakaunganidzwa
Kaynarca Merkez - Pendik - Tuzla Tersane Subway Line nePendik Merkez - Kaynarca Merkez Subway Line Project
Kaynarca Merkez - Pendik - Tuzla Shipyadhi yeMetro Line uye Pendik Center